China RCL-2720 Back-nitaingina LED Linear Light orinasa sy mpanamboatra | lafo vidy
Ohatra amin'ny fampiasana: apetaho amin'ny tabilao misy laminate ≥18mm
Karazana: jiro amin'ny lafiny iray: RCL-2720/1
jiro roa lafiny: RCL-2720/2
Ny kalitao tsara fantsona fantsom-pifandraisana alimina alim-bolo dia manampy amin'ny famoahana ny hafanana, hahatonga ny jiro LED hankafy ny androm-piainany lava kokoa ary tsy hihena ny famirapiratana. Azo tapahina malalaka arakaraka ny takiana.
Ny rafitra jiro Linear, amin'ny alàlan'ny famolavolana modular vokatra sy ny fanovana ny fomba fametrahana azy, dia mamaritra indray ny asany
Ny fomba fampiharana jiro mivantana dia mamaky ny fetran'ny rafitra fanazavana nentin-drazana ary mahatsapa ny "fahalalahana telo", dia ny fahalalahana amin'ny famolavolana olona, ​​ny fametrahana vokatra malalaka ary ny fampiharana maimaimpoana ny tontolo iainana.
Ny famaranana anodized Led Aluminium Profile dia manome fiarovana lehibe indrindra amin'ireo singa, misoroka ny harafesina sy ny harafesina, ary mahatonga azy ireo ho tonga lafatra amin'ny fampiasana an-trano sy ivelany. Mandritra izany fotoana izany dia misy ny Diffusers mba hampitombo ny fiarovana ny tadin'ny tariby sy hifehezana ny fanaparitahana hazavana amin'ny tsipika. End Caps koa dia azo ampiasaina hanakonana tanteraka ny mombamomba azy ary koa hitarika madio tsara ny tariby mankany amin'ilay tsipika.
Ny vokatra dia misy fahalalana elektrika. Azafady aza esorina irery ilay izy. Raha manana olana kalitao ianao dia mifandraisa amin'ny mpanamboatra. Azafady mifandraisa amin'ny mpanamboatra raha mila antsipiriany momba ny fiantohana.
Fanamarihana: ny fahombiazan'ny tena izy dia mety miovaova arakaraka ny tontolon'ny mpampiasa farany sy ny fampiharana azy. Ny sanda rehetra dia sanda famolavolana na soatoavina mahazatra, refesina amin'ny toe-piainan'ny laboratoara 25 ° C.
Teo aloha: RCL-2620 hazavana LED tariby tafaverina miverina
Manaraka: RCL-3620 Back-nitazona LED Linear Light